Dare Rinoti Vana veChikoro Vanofanira Kutora Mhiko Vakamirira Mutongo Waro
Kubvumbi 28, 2016
Mukuru wematare, Va Godfrey Chidyausiku, nemusi weChina vakaramba kutambira chikumbiro chemumwe mubereki VaMathew Sogolani chekuti zvikoro zvimbomira kutoresa vana mhiko kana kuti National Pledge kusvika nyaya yavakakwidza kudare repamusoro reHigh Court itange ranzwikwa.
Mukuru wematare, VaGodfrey Chidyausiku, nemusi weChina vakaramba kutambira chikumbiro chemumwe mubereki, VaMathew Sogolani, chekuti zvikoro zvimbomira kutoresa vana mhiko kana kuti National Pledge kusvika nyaya yavakakwidza kudare repamusoro reHigh Court itange ranzwikwa.
VaSogolani vange vachimiririrwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights VaDavid Hofisi. Vakakwidza nyaya yavo yekutanga kudare repamusoro musi wa 15 Kubvumbi.
Nekuda kwekuti zvikoro zviri kuvhurwa musi wa 3 Chivabvu, VaSologani vakadzokera zvekare kudare reConstitutional Court nemusi weChipiri vachiti vana vambomira kunzi vatore mhiko iyi kusvika nyaya iyi yanzwikwa.
Asi VaChidyausiku havana kutambira chikumbiro ichi vachiti vana vanokwanisa kutora mhiko nyaya iyi iri mumatare.
VaHofisi vati vazotenderana nevanyori vedare kuti nyaya iyi inzwikwe muna Chikumi.
Mhiko iyi inotorwa nevana vachiti vanozvininipisa kuna Mwari, mureza wenyika uye kutenda magamba ehondo yeChimurenga. Asi vabereki vakawanda munyika nevarairidzi vari kuramba kutambira mhiko iyi.
VaSologani avo vane vana vatatu vanoti mhiko iyi inotyora kodzero dzavo semuKristu anopinda chechi yeApostolic Faith Mission.
Vakaendeswa kudare naVaSologani igurukota rezvedzidzo, VaLazerus Dokora, vadzidzisi vakuru paMashambanhaka Secondary nepaChizungu Secondary uye gweta guru rehurumende.
Hurukuro naVaDavid Hofisi